समाचार - कसरी एक दाँत ब्रश छ कि तपाइँ सूट छनौट गर्ने?
कसरी एक दाँत ब्रश छ कि तपाइँ सूट छनौट गर्ने?
त्यहाँ ब्रश को सैकड़ों प्रकार को बजार मा छन्, सबैभन्दा सस्तो एक 30 हो, र मूल्य दुई देखि तीन हजार वा उच्च माथी पर्दछन्। उस्तै ब्रश हो, के फरक छ? के यो आवश्यक छ कि प्रत्येक दिन छोटो १ मिनेट को लागी एक ब्रश मा डलर को हजारौं खर्च गर्न? वा एक केहि दर्जन युआन सस्तो उस्तै प्रभाव छ किन्न सक्नुहुन्छ?
त्यहाँ दाँत ब्रश को बारे मा धेरै ज्ञान छ, चलो यसलाई आज सँगै अन्वेषण गरौं, यसको बारे मा कुरा गर्न को लागी हाम्रो आफ्नै प्रयोगहरु को उपयोग गरौं!
गीला शेभिंग प्रक्रिया मा, ब्रश को मुख्य भूमिका फोम, फोम, र अनुहार मा लागू गर्न को लागी हो। यी दुई चरणहरु पनि शेविंग प्रक्रिया को दौरान रमाईलो को हिस्सा हो।
ब्रशले तपाइँलाई दाढी कव गर्नको लागी क्रीम वा साबुन बाट एक धनी र घने फोम बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
ब्रशले दाह्रीलाई नरम बनाउन र छालालाई मॉइस्चराइज गर्न मद्दत गर्दछ, रेजर जलन र छालालाई नोक्सान नहुँदा छालालाई क्षतिबाट जोगाउँछ। ब्रश को सुंदरता प्रभावी ढंगले प्रत्येक छिद्र, सफा गंदगी मा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाइँ एक स्फूर्तिदायी भावना ल्याउन सक्नुहुन्छ। राम्रो वा नराम्रो ब्रश को नराम्रो तपाइँ स्वर्ग र पृथ्वी को बीच फरक भावनाहरु लाई ल्याउन सक्नुहुन्छ।
वर्तमान मा, बजार मा ब्रश मुख्य रूप मा तीन वर्गहरु मा विभाजित छन्: फाइबर सिंथेटिक कपाल, सुअर bristles, ब्याजर कपाल
फाइबर सिंथेटिक कपाल:
कृत्रिम कृत्रिम कपाल, केहि पुरुषहरु जो पशु कपाल वा पशु संरक्षक को लागी एलर्जी छन् को लागी उपयुक्त।
फाइबर सिंथेटिक कपाल राम्रो र नराम्रो मा विभाजित छ। गरीब फाइबर सिंथेटिक कपाल अपेक्षाकृत कडा छ र कुनै पनी पानी अवशोषण क्षमता छ। यद्यपि तपाइँ कटोरा मा हलचल गर्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, यो फोम बनाउन गाह्रो छ। माथिल्लो अनुहार एक झाडू संग अनुहार मा ब्रश जस्तै लाग्छ, र तपाइँ पनि poked हुनुको पीडा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
■ कोट रंग विरोधी ब्याजर कपाल संग रंगिएको छ, र कपाल अपेक्षाकृत कडा छ।
Vant लाभ: सस्तो! सस्तो हुनु बाहेक अरु कुनै फाइदा छैन।
Advant हानि: यो फोम गर्न गाह्रो छ, र यो मुटु दुख्छ भन्दा साँच्चै पीडादायी छ।
राम्रो फाइबर सिंथेटिक कपाल के हो?
आधुनिक टेक्नोलोजी को उन्नति संग, फाइबर सिंथेटिक कपाल बिस्तारै कपाल कपाल को रूप मा उस्तै कोमलता हुन थालेको छ, र कपाल को रंग पनि ब्याजर कपाल को जस्तै रंगिएको छ, र पानी अवशोषण क्षमता मा पनि सुधार भएको छ। तर छाला अझै पनी थोरै धैर्यता को आवश्यकता छ, पानी अवशोषण को कमी को बाहेक। किनकि यो ब्याजर कपाल जस्तै नरम छ, माथिल्लो अनुहार छेड्ने को भावना बिना, अधिक सहज महसुस गर्दछ। यदि तपाइँ साँच्चै जनावर कपाल एलर्जी हुनुहुन्छ र पशु संरक्षण माया गर्नुहुन्छ, तपाइँ एक राम्रो फाइबर सिंथेटिक कपाल यो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
चाहे यो राम्रो फाइबर सिंथेटिक कपाल हो वा गरीब फाइबर सिंथेटिक कपाल हो, त्यहाँ एक सामान्य समस्या हो, त्यो हो, छोटो कपाल र कपाल झर्ने हो। सामान्यतया, यो एक को बारे मा एक बर्ष मा प्रतिस्थापन गर्न को लागी सिफारिश गरीन्छ।
■ कोट रंग विरोधी ब्याजर कपाल संग रंगिएको छ, र कपाल नरम छ।
■ लाभ: उच्च कोमलता।
Advant हानि: कमजोर पानी अवशोषण, लामो झाग समय र कपाल झर्ने।
सुअर ब्रिस्टल बाट बनेको शेविंग ब्रश पुरुषहरु को लागी जो गीला शेविंग खेल्न शुरू गरीरहेछन् को लागी अधिक उपयुक्त छ। कपाल फाइबर र ब्याजर कपाल भन्दा थोरै कडा हुन्छ, जसले छालालाई राम्रोसँग सफा गर्न सक्छ। प्राकृतिक जनावरहरु को पानी ताला क्षमता यो सजिलो फोम गर्न को लागी बनाउँछ।
साना साना दोषहरु को बाहेक जो कोमल पर्याप्त छैन, कहिलेकाहिँ अनुहारमा टाँसिएको दुखाइको अनुभूति हुनेछ। प्रयोग को एक लामो समय पछि, कपाल बिस्तारै विकृत र विभाजित हुनेछ।
■ कपालको रंग शुद्ध बेज छ, र कपाल अलि कडा छ।
Vant लाभ: पशु कपाल प्राकृतिक पानी ताला क्षमता र सजीलै foams छ।
Advant हानि: यो पर्याप्त नरम छैन, कपाल विकृत हुनेछ, र कपाल झर्न सक्छ।
यो मुख्यतया जनावर "ब्याजर" को बिभिन्न भागहरु बाट कपाल बनेको छ। यो जनावर मात्र पूर्वोत्तर चीन र विश्व मा यूरोपीयन आल्प्स मा पाइन्छ। किनकि यो दुर्लभ र बहुमूल्य छ, यो सबैभन्दा उन्नत आनन्द हो कि कोहि ब्रश मा नक्कल गर्न सक्दछ।
ब्याजर कपाल धेरै पानी अवशोषित र पशु कपाल मा पानी ताला छ, जो ब्रश हजामत को लागी धेरै उपयुक्त छ। पानी को एक सानो मात्र एक धेरै धनी र नाजुक फोम बनाउन सक्छ। कोमलता पनि एक नयाँ स्तर हो कि सूअर bristles र फाइबर सिंथेटिक कपाल को तुलना मा पुग्न सकिदैन। यो एक भावना ल्याउँछ कि तपाइँ अन्य ब्रश तपाइँ यसलाई प्रयोग गरे पछि परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न।
निस्सन्देह, ब्याजर कपाल पनि वर्गीकृत छ, र कपाल को बिभिन्न भागहरु भावना को फरक स्तरहरु छन्।
Bad ब्याजर कपाल को प्राकृतिक रंग धेरै नरम छ।
■ लाभ: सुपर पानी ताला क्षमता, धनी र नाजुक फोम, नरम कपाल, अनुहार मा सहज।
■ हानि: उच्च मूल्य।
शुद्ध ब्याजर कपाल:
ब्याजर को घाँटी, काँध, हतियार को धेरै प्रयोग गरीन्छ, र काटिएको भित्री कपाल बेजर कपाल को अन्य ग्रेड भन्दा थोरै कडा छ। यो केवल ब्याजर कपाल संग सम्पर्क मा प्राप्त गर्न चाहने खेलाडीहरु को लागी अधिक उपयुक्त छ। सेभिंग ब्रश को यो स्तर पनि अधिक लागत प्रभावी छ।
सर्वश्रेष्ठ ब्याजर कपाल:
यो ब्याजर को विभिन्न भागहरु मा 20-30% नरम कपाल बाट बनेको छ, जो अधिक नरम र शुद्ध कपाल भन्दा आरामदायक हुनेछ। यो खेलाडीहरु जो ब्याजर कपाल ब्रश छुने पछि अर्को स्तर मा स्तरवृद्धि गर्न चाहानुहुन्छ को लागी उपयुक्त छ।
सुपर ब्याजर कपाल:
सुपर ब्याजरहरू ब्याजर कपाल हुन् जुन "उत्तम" वा "शुद्ध" भन्दा महँगो हुन्छ। यो ब्याजर को पछाडि कपाल को 40-50% बाट बनेको छ। उच्च गुणस्तरको शीर्ष अलिकति सेतो छ। यो सामान्यतया उच्च गुणस्तरीय "शुद्ध" कपाल को ब्लीच समाप्त हुन्छ।
Silvertip ब्याजर कपाल:
शीर्ष ब्याजर कपाल उच्चतम गुणस्तर ब्याजर कपाल हो। यो पछाडि १००% कपाल बाट बनेको छ। कपाल को यो भाग पनि धेरै दुर्लभ छ, त्यसैले मूल्य अपेक्षाकृत अधिक महान छ। कपाल को शीर्ष एक प्राकृतिक चांदी सेतो रंग हो, कपाल धेरै नरम छ जब प्रयोग गरीन्छ, तर यो यसको लोच गुमाउँदैन। युरोप मा, अधिक कुलीन र धनी व्यापारीहरु आफ्नो पहिचान हाइलाइट गर्न को लागी शीर्ष ब्रश छनौट गर्नेछन्।
विभिन्न ब्रश छनौटहरु तपाइँ एक फरक शेविंग अनुभव ल्याउनेछन्। चाहे यो पीडा वा विलासिता हो, यो तपाइँको छनौट मा निर्भर गर्दछ।
मेकअप ब्रश उपकरण, मेकअप ब्रश, नाई शेभ, सेभिंग सेट, ब्रश मेकअप सेट गर्नुहोस्, मेकअप ब्रश सेट,